WARBIXIN: 8 ka mid ah 10 qof ee magangalyo doon ah oo doonaya ineey Iswiidhan joogaan | Somaliska
WARBIXIN: 8 ka mid ah 10 qof ee magangalyo doon ah oo doonaya ineey Iswiidhan joogaan
Warbixin tirro koob ah oo laga diyaariyey magangalyo doonka dalkaan Iswiidhan ayaa ra’yi arruurin lugu sameeyey waxaa ay sheegeen intooda badan ineey doonayaan ineey ku nagaadaan dalkaan.
18-ka goobood oo ka mid ah xarrumaha ay ku nool yihiin magangalyo doonka ayaa dad kor u dhaafay 1691 oo ka qeyb qaatay ra’yi arruurintaasi ayaa intooda badan cod dheer ku sheegeen sida ay ugu qanacsan yihiin joogitaankooda dalkaan Iswiidhan. Waxaa ay sidoo kale tilmaameen ineey doonayaan in dalkaan ay nolol ka abuurtaan kuna nagaadaan. 7% oo dadkaasi ka mid ah misna tibaaxay ineey doonayaan in dib loogu celiyo dalalkoodii ay ka yimaadeen.
Magangalyo doonkaan oo ka kala yimid Soomaaliya, Iiraan iyo Suuriya, ayaa soomaaliddii la weydiiyey ra’yigoodii waxeey sheegeen in gebi ahaanba dooneeyn in markale ku laabtaan Soomaaliya ama lugu celiyo. Halka 13% ka mid ah iiraanta 11% suuriyaiintu sheegeen ineey doonayaan in dalalkoodii dib ugu laabtaan.
Warbixinta tirro koobka ah ayaa sidoo kale lugu sheegay 59% (konton iyo sagaal boqolkiiba lixdan) in magangalyo doonka ay ku qanacsan yihiin hooyga ku meel gaarka ah ee ay degan yihiin muddada sharciga suganayaan halka hal meeloodna ayba sheegeen ineey aad ugu qanacsan yihiin hooygaasi. Saas oo ay tahayna waxaa jirro koox ka mid ah dadkaasi oo aan qanacsaneyn sababo la xirriira muddada jawaabta oo la sugayo oo aad u dheer. 37% oo dadkaas ka mid ah waxaa ay sheegeeen oo kale ineeysan ku fileyn lacagta gunadaha ay ay waaxda socdaalku siiso. Sidaas si u dhowna waxaa ay tilmaameen in cuntada ay meesha ka cunaan eeysan wanaagsaneyn.
Isku soo wada duub oo jawaabta ay magangalyo doonka sugayaan muddada dalabkooda magangalyo lugu howlna yahay oo aad u dheer ayaa qaarkood ku keentay marxalad wel wel iyo isla hadal badan. Sanadkan dabayaaqada waxaa warbixinta lugu xusay in la dhameeyey kala bar codsiga magangalyo doonka oo tiradooda ay gaareeysay 163.000. Waxaa la filayaa in muddada la sugayo jawaabta codsiga magangalyo uu ka sii dheeraad inta haatan uu yahay lana sugayo 14 ilaa 15 bilood.